1. ISiqendu 6B soMthetho wezeNgqesho yooTitshala (uMthetho 76 ka-1998) (Employment of Educators Act (EEA)) (Act 76 of 1998), sibonelela ngokutshintshwa kwengqesho yethutyana yootitshala itshintshelwa kwingqesho esisigxina.
2. Utitshala wethutyana ngutitshala oqeshwe njengangoku kwiSithuba seNqanaba 1 esingenamntu nesivunywe ngokusemthethweni (substantive vacant Post Level 1) okweso sithuba ngokungesosigxina ithuba elimiselweyo (closed period). Le nkcazo ayisebenzi kootitshala abaye baqeshwa kwizithuba zonyuselo-sikhundleni ezingenamntu ezivunywe ngokusemthethweni njengababambeleyo (in an acting capacity), okanye kwabangene kwizithuba zabanye ootitshala (substitutes) abaqeshwe isigxina abangekhoyo emsebenzini, ngenxa yaso nasiphi na isizathu. Kucelwa ufunde umhlathi 10 apha ngezantsi.
Ootitshala abasele befumene ithuba lokwenza inkonzo ende kwezemfundo umz., abo sele bethathe umhlala-phantsi, abo bathathe umhlala-phantsi ngaphambi kwexesha, abakhutshwa ngenxa yokungaphili okanye abathatha iphakheji yokuyeka ngokuzithandela (voluntary severance package) neyaluhlobo luni na, abafakwanga bona kule miqathango equlethwe kule ngcaciso imfutshane.
Izithuba ezazipapashwe kwizintlu zezithuba ukuze zizaliswe isigxina, ukususela nge-1 Januwari 2012, nazo azibandakanywanga kwimiqathango equlethwe kule ngcaciso imfutshane. Nakuba kunjalo, apho iSebe leMfundo leNtshona Koloni (WCED) liye lenza isigqibo ngokusemthethweni sokuba lingasizalisi isithuba sengqesho njengoko sasipapashwe kuLuhlu lweZithuba 1/2012, isithuba sengqesho esilulo hlobo naso singathathelwa ingqalelo yokuba sizaliswe isigxina ngokwemiqathango equlethwe kule ngcaciso imfutshane. Ukongeza, apho izithuba zaziye zapapashwa kuLuhlu lweZithuba 1 no-2 luka-2012, kuyekelwe kwingqiqo (it is at the discretion) yebhunga lolawulo lesikolo ukuba mhlawumbi lilandele inkqubo yokukhetha (selection process) okanye lisizalise isithuba eso ngokuthi litshintshele ingqesho kwesisigxina.
3. Ukutshintshwa kwengqesho yethutyana ukuba ibe yingqesho esisigxina kwenziwa ngokwengqiqo yentloko yelo sebe lemfundo lephondo
4. Ngokumalunga noku, kubaluleke gqitha ukuqaphela ukuba iSebe iWCED liyangqinelana nomgaqo (principle) wokhuphiswano oluvulelekileyo xa kuziwa kumba wokuzaliswa kwezithuba ezabelwe lona ngokusemthethweni nezabelwe amaziko aphantsi kolawulo lwalo. Ngenxa yoku, izithuba zipapashwa qho kumaphephandaba kazwelonke (kwimeko yezithuba ezisezi-ofisini) zize zipapashwe kwizintlu zezithuba (kwimeko yezithuba ezikumaziko emfundo kwanezo zisezi-ofisini).
5. Ngokubonisana nemibutho yootitshala emelweyo kwiBhunga lezeMfundo lePhondo lezoBudlelwane eMisebenzini (Provincial Education Labour Relations Council) (PELRC), iSebe iWCED lifikelele esigqibeni ngezi khrayitheriya zilandelayo ngokumalunga nokutshintshwa kwemeko yengqesho yootitshala bethutyana ibe yesisigxina ngokweSiqendu 6B soMthetho wezeNgqesho yooTitshala ka-1998 ukususela nge-1 Julayi 2012:
5.1 Ukuqeshwa isigxina makwenziwe kwisithuba esingenamntu seNqanaba 1 esivunywe ngokusemthethweni (vacant substantive Post Level 1), kwaye isithuba masiboniswe kwinani lezithuba zengqesho zootitshala abatsha ezabelwe eso sikolo ngo-2012.
5.2 Utitshala ochaphazelekayo makabe ngoku uqeshwe okwethutyana liSebe iWCED, ithuba elingakhange liqhawuke ukususela ngoJulayi 2011 okanye ngaphambi koko.
5.3 Kufuneka utitshala:
abe uwuqeqeshelwe ngokufanelekileyo umsebenzi wokufundisa
abe uyazifezekisa iimfuno ezingundoqo zesithuba utshintsho lwengqesho yakhe oluza kwenzelwa sona; yaye
makabe ubhalisile kwi-SACE.
5.4 Ukuqeshwa isigxina makuxhaswe libhunga lolawulo lesikolo. Apho libhunga lolawulo lesikolo lingakuxhasiyo ukutshintshelwa kwisithuba esisigxina, malingenise izizathu zokuba kungani na lingakuxhasi ukutshintshelwa kwisithuba esisigxina
6. Umhla wokugqibela wokufakwa kwezi zicelo ngowama-20 Juni 2012.
7. Njengoko la ingamalungiselelo awodwa nangaqhelekanga kwabo titshala sele bekwizithuba ezingenamntu ezivunywe ngokusemthethweni (vacant substantive posts), imiyalelo yobulungisa kwezengqesho (employment equity) ayisayi kusebenza kwezi zithuba.
8. Ootitshala abaqeshwe okwethutyana abafuna ukwenza izicelo zokutshintshwa kwengqesho yabo ibe yesisigxina ngokweSiqendu 6B se-EEA, 1998, mabangenise ifom u-DPE 1 (iFom yeSicelo seNgqesho) ezaliswe ngokupheleleyo kunye neleta enezizathu ezixhasayo kwiSebe iWCED kodwa mayiqale idlule kwibhunga lolawulo lesikolo. Ezi zicelo mazithunyelwe ngeposi kule dilesi ilandelayo:
okanye ziziswe ngumntu okanye zithunyelwe ngekhuriya apha
nekufuneka ke zifakwe kwibhokisi ebhalwe �Recruitment and Selection Centre�.
9. Kucelwa niqaphele ukuba esi sibonelelo sokutshintsha ingqesho yethutyana ukuba ibe yingqesho esisigxina lithuba elifika kube kanye qwaba nokuba izicelo ezifike emva kokuba udlule umhla omiselweyo azisayi kunikwa ngqwalaselo.
10. Ootitshala ababambele abanye abasenkonzweni (serving substitute educators), bangaqwalaselwa nabo ngenjongo yokuba baqeshwe isigxina ngokwemiqathango ecaciswe kule ngcaciso emfutshane.
11. Ziyacelwa iinqununu ukuba zincede ziqinisekise ukuba, onke amabhunga olawulo ezikolo zazo kunye nabo bonke ootitshala abasebanza apho ezikolweni zazo, ngokukodwa abo baqeshwe okwethutyana kunye nabo babambele abanye, bayaziswa ngale setyhula.
12. Le ngcaciso imfutshane isebenza kuphela kwizikolo zikarhulumente eziqhelekileyo, nakwizikolo zemfundo eneemfuno ezizodwa zikarhulumente.
"Employment of Educators Act (EEA), 1998" (ubukhulu: 71 KB)